Ny Trackback tao amin’ny bilaogiko boliviàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2019 5:58 GMT
Tsaroako fony ireo trackbacks nampidobodoboka ny foko. Tsaroanareo ireny? Ny Trackbacks dia ireo fanairana mipetraka ao amin'ny bilaogintsika mba hahafantarantsika fa nisy olona nahita azy ho mahaliana ka nametraka rohy mankao aminy na miresaka momba azy.
Indray andro izay, tamin'ny 2005, nahamarika trackback iray nipoitra aho, nampahafantatra ahy hoe ity bilaogy antsoina hoe Global Voices ity dia nametraka rohy mankany amin'ny lahatsoratra iray momba ny politika boliviàna. Ny zavatra fantatro taorian'izay, nisy imailaka nalefan'i David Sasaki nipoitra tao anatin'ny boaty fandraisako hafatra, nangataka ahy raha toa ka mahaliana ahy ny hanoratra lahatsoratra isankerinandro momba izay mitranga any anatin'ireo bilaogy boliviàna. Voajanahary ny fahatsapako ho nomena voninahitra, saingy nahatsiaro ihany koa andraikitra iray hisolo tena araka ny tokony ho izy ny fireneko manoloana ireo mpamaky maro erantany izay toa manao safobemantsina sy manetry ny fireneko ho amina toetra vitsivitsy voafetra.
Lohatenin'ny lahatsoratro voalohany ny hoe “The State of Bolivian Blogs” (ny toerana misy ny bilaogy boliviàna) nivoaka tamin'ny 30 Septambra 2005 ary tamin'izany fotoana izany dia angamba nisy bilaogy ampolony teo ho eo no tena nosoratan'ireo Boliviana nipetraka tany ivelany na ireo mpila ravinahitra nonina tao amin'ny firenena. Noho ny isa voafetra tamin'ireo fitaovana azo noraisina, mora ny nanara-maso sy nahafantatra ireo boliviàna bilaogera tsirairay, maro tamin-dry zareo angamba no nihevitra ahy ho mpahay tantara tamin'ireny fotoana ireny. Rehefa mitodika amin'izay lahatsoratra izay (tsy misy sary na fitanisàna!), dia mampahatsiahy ahy ireo fotoana tsotra izay tsy mbola nisian'ny tambajotra sosialy ary ny ankamaroan'ireo hetsika tety anaty aterineto dia voafetra ho tanaty fantsona IRC na gazety an-tambajotra.
Tamin'izany fotoana kely no mba fantatro hoe ny fanoratana ho an'ny GV dia mety hanokatra varavarana marobe. Tsy ela akory taorian'ny nanoratana ho an'ny GV, nasaina aho hanatrika fiarahana misakafo nokarakarain'ny Harvard tao Washington DC, toerana nonenako tamin'izany fotoana izany. Im-betsaka niantso ahy ny BBC nikaroka boliviana mpanaramaso izay miteny anglisy ihany koa mba haneho hevitra momba ireo zavamitranga ao amin'ny firenena.
Dia nanao tohivakana teny ny zavatra rehetra taorian'ireo herinandro maro nitetezana lahatsoratra am-bilaogy izay nanitatra ny fahalalàna efa nananako momba ny firenena, sy nitondra ahy nony farany ho lasa toniandahatsoratra ho an'ny fiteny Espaniôla sy Amerika Latina, ary Talen'ny Rising Voices nony avy eo. Mandrakariva dia manontany ahy ny olona momba izay nataoko nahatongavako amin'ny asa nonofinofisiko, ary mandrakariva dia ambarako ireo andro fahiny naha-mpirotsaka an-tsitrapo ahy nanoratra tsy tapaka ho an'ny GV ary nahafantarako misimisy kokoa ny vondrom-piarahamonintsika sy ny iraka tontosainy. Izany rehetra izany dia trackback tsotra kely iray monja sy ny lahatsoratro voalohany no niantombohany.